August 2018 – Trend.com.mm
ဒီတစ်ခါတော့ အားလပ်ရက်မှာ အချစ်ဇာတ်လမ်းကောင်းကောင်းလေးနဲ့ဖီးလ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် ၂၀၁၈ မှာထွက်ရှိထားတဲ့ ဘောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားကောင်းလေးညွှန်းပေးချင်ပါတယ်။ဇာတ်ကားလေးနာမည်ကတော့ “October” ပါ။ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ပရိသတ်တွေသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ မင်းသား » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Movies, NewsLeaveaComment on ရင်ထဲမှာခံစားချက်တစ်ခုခုစွဲထင်ကျန်ရစ်နေအောင် ရသပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ “October”
မိန်းကလေးတွေရဲ့စိတ်ကနားလည်ရခက်သလို တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်တောင်ပြန်နားမလည်နိုင်တဲ့အခိုက်အတန့်တွေရှိပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်! မိန်းကလေးတွေရဲ့စိတ်နဲ့အပြုအမူတွေဟာ တစ်ခါတစ်ရံဒီလိုထူးဆန်းတတ်သေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဘလော့ခ်တစ်ခုကနေ ရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။။ထူးဆန်းတယ်ဆိုပေမဲ့ စိုးရိမ်ရလောက်အောင်တော့မဟုတ်ပါဘူး 🤭မိန်းကလေးတိုင်းမဟုတ်တောင် မိန်းကလေးတော်တော်များများဟာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, WellbeingLeaveaComment on မိန်းကလေးမှန်ရင် ဒီထဲက တစ်ချက်ချက်နဲ့တော့ ငြိဖူးရမယ်…😅
ပျော်ရွှင်စရာတွေ မရှိတော့တဲ့ RS တစ်ခုဟာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ စိတ်ဖိစီးရပါတယ်။ စိတ်ကျရောဂါကိုပါအစပျိုးလာစေပါတယ်။ လမ်းခွဲခြင်းဟာ တစ်ချို့ အတွဲတွေအတွက်တော့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on လမ်းခွဲရမှာကို လူတွေဘာလို့ကြောက်ကြလဲ ?
အသက် ၂၈နှစ် အော်စကာဆုရှင် Jennifer Lawrence ကတော့ မကြာခဏ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းတွေ ၊ ပွဲပေါင်းမြောက်မြားစွာနဲ့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Movies, NewsLeaveaComment on Jennifer Lawrence ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထိန်းသိမ်းပုံနဲ့ အစားသောက်ရွေးချယ်မှုပုံစံ
Taylor Swift ဆိုတဲ့အဆိုတော်မလေးဟာ ကြင်နာနွေးထွေးတဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဆိုတာ သူမရဲ့ပရိသတ်တိုင်းသိကြပါတယ်။သူမကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေဝမ်းသာသွားအောင်စပရိုက်စ်လုပ်လိုလုပ်၊အကူအညီလိုနေတဲ့နေရာတွေအတွက်လည်း နှောင့်နှေးတယ်ဆိုတာမရှိအမြဲအသင့်ဖြစ်နေတတ်တဲ့သူမဟာ အခုလည်း အသက် ၁၀နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အိပ်မက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ပြန်ပါပြီ။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Music, NewsLeaveaComment on Taylor Swift ဆိုတာ ဒီလိုတွေကြောင့်လည်း ပရိသတ်အချစ်ခံနေရတာ…💕
စက်တင်ဘာလထဲမှာ ထွက်ရှိမယ့် Elle ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်းအတွက် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပြီး အင်တာဗျုးတွေလည်း ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ K-pop လောကမှာ သူမဖြတ်သန်းခဲ့ရပုံအကြောင်းကို » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in K-Pop, Music, NewsLeaveaComment on ပရိတ်သတ်တွေက သူမအတွက် ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့အတွက် တန်ဖိုးထားကြောင်းပြောပြလာတဲ့ HyunA
ဘယ်သူမဆိုကိုယ်ရည်မှန်းရာ ပန်းတိုင်အတွက် အခွင့်အလမ်းရောက်တဲ့အချိန်ထိ ထိုင်စောင့်မနေပါဘူးနော်။ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်မရသေးခင်အထိကြားထဲမှာစားဝတ်နေရေးကိုဖြေရှင်းဖို့၊အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့ အလုပ်တွေမျိုးစုံလုပ်ခဲ့ရသူချည်းပါပဲ။ဘ၀မှာ အလုပ်တစ်ခုတည်းရေရှည်လုပ်သွားတဲ့သူကိုတွေ့ဖို့လည်းရှားပါတယ်။သာမန်လူနေမှုဘ၀ကလူတွေတင်မကဘူး ကိုယ်တွေသဘောကျနှစ်သက်ရတဲ့ကိုရီးယားအနုပညာရှင်မင်းသမီးတွေကလည်းအခုလိုနာမည်ကျော်တွေမဖြစ်ခင် အချိန်ကာလမှာ ဒီလိုအလုပ်အကိုင်တွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်တဲ့။ထင်တောင်မထင်ထားခဲ့မိတဲ့ အလုပ်တွေပေါ့။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Movies, NewsLeaveaComment on နာမည်ကျော် Cele တွေမဖြစ်ခင် သူတို့ ဒီအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ကြတာပါတဲ့…😮
ခေါင်းလျှော်တိုင်း ဆံပင်မွှေးတွေ အထွေးလိုက် ကျွတ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေပြီလား? စိုနေတဲ့ ဆံပင်ကို အားရပါးရသုတ်နေချိန် ဆံပင်ကိုလက်နဲ့သပ်လိုက်တိုင်း ဆံပင်တွေ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, LifestyleLeaveaComment on ဆံပင်ကျွတ်သက်သာစေမယ့် အိမ်တွင်းနည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ
ချစ်သူရယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ညှိနှိုင်းရမယ်။တစ်ယောက်ဆန္ဒတစ်ယောက်ဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်။နားလည်မှုရှိရမယ်စသဖြင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူကြည်ဖြူစွာနဲ့ဘ၀ကိုလျှောက်လှမ်းဖို့က အရေးကြီးဆုံးပါ။ဒါပေမဲ့ ကိုယ်မကြိုက်ဘူးပြောထားတဲ့ကိစ္စကိုလုပ်လို့၊ကိုယ့်စကားကိုနားမထောင်လို့စသဖြင့် ချစ်သူတွေကြားထဲမှာ ဒီပြဿနာက အမြဲတမ်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေတာက ထင်သလောက်မလွယ်ပါဘူး။သူပြောင်းလဲဖို့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on ကိုယ့်ဘ၀အတွက် လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ချစ်သူကောင်းတစ်ယောက်ဆိုတာ…💕
အမေရိကန်ရဲ့ နာမည်ကြီး တီဗီစီးရီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ”Game Of Thrones”မှ Arya Stark အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Movies, NewsLeaveaComment on ”Game Of Thrones” သရုပ်ဆောင် Maisie Williams ကလည်း BTSရဲ့ ပရိတ်သတ်ပါပဲတဲ့..